Ingcibi yeVintage, kwidolophu yaseWeaverville!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMark
"I-Owl House" yengcibi entliziyweni ye-Weaverville, imizuzu esuka e-Asheville. Hamba uye kwiindawo zokutyela, iigalari zobugcisa kunye nemivalo! Uyakonwabela ukufudumala kwemigangatho yeenkuni, indawo yomlilo, indawo enkulu yokonwabisa ngaphandle kunye nomgodi womlilo, igrill, i-jacuzzi yabantu aba-2 kunye Iyadi enkulu Hlala kwaye ubukele ukutshona kwelanga kunye neentaba kwiveranda engaphambili. Ikhitshi eligcweleyo, indawo yokuhlamba impahla, iTV enkulu enesofa epholileyo, indawo yokuhlala enendawo yomlilo nokunye okuninzi!
Uxolo akukho zilwanyana zasekhaya zivumelekile.
'I-Owl House' likhaya elineminyaka eli-100+ ubudala elifudumeleyo kwaye liyamema! Iveranda egqunywe ngaphambili eneentsika zamatye, iyadi enkulu yangasemva ene-firepit, i-grill kunye neendawo ezininzi zokuhlala ukonwabela imozulu ye-NC. Ngaphakathi uya kufumana yonke into oyifunayo ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho. Igumbi lokutyela, ikhitshi eligcweleyo, ukuhlala/igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo, igumbi leTV *Akukho Cable, kodwa kukho iApple TV (Kodwa kuya kufuneka uze netflix yakho kunye neepassword ze-hulu ukuze uzibukele)
Igumbi ngalinye lokulala linomandlalo we-queen we-foam wokuthuthuzela kwakho kunye nendawo eninzi ye-closet. Igumbi ngalinye lokulala linebhafu. Kukwakho newasha kunye nesomisi onokusetyenziswa.
"I-Owl House" ihonjiswe ngobugcisa bokuqala kunye neziqwenga ezikhethekileyo, oku akusiyo indlu 'ye-cookie-cutter'. Indawo enobuhlobo, umgama wokuhamba ukuya ezivenkileni, kwindawo yokutyela kunye nemivalo. I-pizza e-asheville kukuhamba nge-Blue Mountain Pizza, iivenkile ezithengisa ukutya okungaphantsi kweemayile. I-10-15 imizuzu yokuqhuba lula ukuya e-asheville! Indawo ebanzi yokufikelela lula kunye nokupaka iimoto ezimbini.
Kukho indlu encinci yeendwendwe ngasemva nayo eqeshiweyo, kodwa yohluliwe.
Eyona Pizza kwindawo! eBlue Mountain Pizza, iSushi kunye nokutya kwaseAsia eSoba Sushi kunye neeNoodles. Eyona ndawo yokubhaka ilungileyo kwindawo yase-Asheville kukuhamba umgama, i-Well-Bread Bakery, eyona dessert ibalaseleyo kunye nekofu, ikwalungele isidlo sasemini! Fumana ukutya okumangalisayo kweTaliyane kwi-Onion yeglasi okanye eyona bhega igqwesileyo kwi-Main Street Grill. Okuninzi!
Ndihlala ndifumaneka ukuba kukho imibuzo okanye iingxaki!
Nceda ungalibazisi ukubhala okanye ukufowunela... (941) 587-9502
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R7967
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Weaverville